भोलि असोज ५ गते मंगलबार, कस्तो रहला तपाईंको दिन ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल ! – Ramailo Sandesh
दिन शुभ र अनकुल रहेको छ । कार्यालयमा सहकर्मचारी तथा उच्च अधिकारी सँगको सम्बन्ध सुमधुर हुनेछ । साथै काममा साथ सहयोग मिल्नेछ । पदोन्नतीको सम्भावना रहेको छ । सामाजिक मन सम्मान बढ्नेछ । आफन्तसँग रमाइलो भेट हुनेछ।
दाम्पत्य जीवन शुख मय हुनेछ । पारिवारिक वातावरण रमाइलो हुनेछ । शारीरिक तथा मानसिक रुपम स्वस्थ अनुभव हुनेछ। कममा सहकर्मीको सहयोग मिल्नेछ । स्त्री मित्रसँग भेट हुनुको साथै शुभ समाचार मिल्नेछ । आकस्मिक धन लाभको योग बनेको छ ।
खर्च नियन्त्रण गर्नु होला । क्रोध तथा बोलीमा संयमता अपनाउनु होला । विवादमा फस्न सक्ने योग रहेको हुँदा सचेत रहनु होला । शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य मध्यम रहेको छ । नकारात्मक बिचारले मनम हावी गर्न सक्ने हुँदा सचेत रहनुहोला।